စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဖြစ်သွားတဲ့ အောင်လအန်ဆန် အပေါ် အချက်အလက်ကျကျ သုံးသပ်ပြလိုက်တဲ့ လက်ဝှေ့ ဖိုးသော် !! – Cele Top Stars
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဖြစ်သွားတဲ့ အောင်လအန်ဆန် အပေါ် အချက်အလက်ကျကျ သုံးသပ်ပြလိုက်တဲ့ လက်ဝှေ့ ဖိုးသော် !!
စိတ် ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဖြစ်သွားတဲ့ အောင်လအန်ဆန် အပေါ် အချက်အလက်ကျကျ သုံးသပ်ပြလိုက်တဲ့ လက်ဝှေ့ ဖိုးသော်
အကြိမ်ကြိမ်အောင်ပွဲဆင်လာတဲ့ အောင်လတစ်ယောက် Rienner နဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာ ရှုံးခဲ့တဲ့အတွက် အားလုံးအောင်လအတွက် ဝမ်းနည်းခံခက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်နော်။
အောင်လအန်ဆန်ရှုံးသွားတဲ့ ပွဲအပေါ်ကို လက်ဝှေ့သမား ဖိုးသော်ကတော့ Sunday Journal နဲ့အင်တာဗျူးမှာ အခုလိုပဲ သုံးသပ် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်နော် ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေ။
“ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ကိုဗစ်နဲ့မဆိုင်ဘူး သုံးချီ လေးချီမှာ ကျသွားရင်တော့ ကိုဗစ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ အခုပထမအချီမှာ သူလည်းလေ့ကျင့်ထားတာဗျာ မမောဘူး ၃မိနစ်နဲ့၂၆စက္ကန့်မှာပွဲပြီးသွားတာနေမယ် သုံးမိနစ်ကျော်အတွင်းမှာ ချန်ပီယံတစ်ယောက်အနေနဲ့ လက်ရည်ကျစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ ကျွန်တော်ကတော့ သူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းနည်းလေးစိတ်ထိခိုက်သွားပုံရတယ်ပေါ့နော် ရှုံးသွားတော့ဝမ်းနည်းတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ် Team စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော် တစ်သင်းတည်းမှာ ချန်ပီယံ ၂ယောက်အတူတူကာကွယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘောလုံးနဲ့ဥပမာပေးရင် ရှေ့မှာ ပင်နယ်တီတစ်ယောက်မဝင်သွားသလိုပေါ့ နောက်ကန်မယ့်သူက pressureဝင်သွားသလိုပေါ့”
“နောက်တစ်ချက်က ground day မှာ ပထမအချီမှာပဲ ရအောင်လုပ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် ချက်ချင်းပဲဟိုဘက်က back position ကိုယူလိုက်တယ် သူတော်တော်လျှင်မြန်တာပေါ့ ဒီတစ်ကွက်ကို ကျင့်ယူထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ် အားသာချက်က အရပ်ရှည်တော့ ခြေတံလက်တံရှည်တော့ ထိန်းချုပ်လို့ရသွားတာပေါ့ …
လူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုချုပ်လိုက်တယ် အဲ့မှာ အောင်လပြန်လှည့်လို့မရတော့ဘူး အဲဒီ့အချိန်မှာအောင်လက နောက်ကိုသံဇကာနဲ့ကပ်ပြီး pressure ပေးထားတယ်ပေါ့ ဒါက space ရှိမှရမှာလေ လှုပ်ရှားမရဘူး အဲဒီ့အချိန်မှာလှဲချလိုက်တယ် အောင်လကလှန်ပြီး ပြန်ရှောင်ထွက်ဖို့ကြိုးစားချိန်မှာ ပထမအချီဆိုတော့ ချွေးမထွက်သေးတော့ ချောမွေ့မှုမရှိသေးဘူးပေါ့နော် လုပ်ရကိုင်ရ ဆွဲထုတ်ရတာ ကျပ်နေတာပေါ့ နောက်တစ်ခုက သူပြန်လှည့်ပြီး ပြန်ထချိန်မှာ အငိုက်မိသွားတယ်ပေါ့”
“အောင်လကသံဇကာကိုကိုင်ပြီး ရှေ့ကိုငိုက်မသွားအောင် လှမ်းထတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့စည်းမျဉ်းက သံဇကာကိုကိုင်ပြီးထလို့မရဘူးပေါ့နော် တွန်းတာကလွဲ၍ပေါ့ အောင်လက သံဇကာကိုကိုင်မရဘူးလို့ ဒိုင်ဖြုတ်ချလိုက်တယ် အဲဒီ့အချိန် အောင်လပြုတ်ကျသွားတော့ ဟိုကလည်ပင်းကိုသိုင်းပြီး ဖြုတ်ချလိုက်တာပေါ့ ပထမအချီဖြစ်တဲ့အတွက် အားအရမ်းရှိတဲ့အချိန် သူအကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ လည်ပင်းချုပ်တဲ့အကွက်နဲ့ပေါ့…
အောင်လဆိုလည်း ပါဝါလက်သီးတွေပေါ့ ဟိုက ချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အောင်လဒုတိယအခွင့်အရေးမရဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ MMA မှာက နည်းနည်းလေးမှ အမှားမခံဘူးဗျ အခွင့်အရေးသာသွားတာနဲ့ အနိုင်အရှုံး result ထွက်သွားတတ်တယ် ချန်ပီယံလုပွဲဆိုတော့လည်း ပိုဂရုစိုက်ရတာပေါ့ အောင်လရှုံးသွားတာ သူ့ရဲ့performance အပြည့်မပြလိုက်ရတော့ ကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူး ဟိုဘက်ကလည်း အခွင့်အရေးရလို့ နိုင်သွားတာပေါ့ ဘာပဲပြောပြောအားလုံးရင်ကွဲရတာပေါ့နော်”
“ပွဲအခြေအနေက ရိုင်ဒီယာက သူပြောတဲ့အတိုင်းချုပ်ကွက်နဲ့ပဲကစားတာ သူထိုးလည်းတွဲလုံးနည်းတယ် ပထမသူချုပ်လိုက်ချိန်မှာ အောင်လကပင့်လက်သီးထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော် ပင့်လက်သီးလွတ်သွားတယ် ခြေထောက်ကန်တာတော့ထိသွားတယ် ရုတ်တရက်ပေါ့ လုံးဝမထင်ထားတဲ့အချိန် risk ယူလိုက်တာပေါ့ မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ကိုယ်လုံးပစ်ဝင်လိုက်တာ အောင်လလည်းမထင်လိုက်လို့ဖြစ်မယ် ဒူးတောင်မတိုက်လိုက်ဘူးပေါ့ ပြီးသွားတဲ့အချိန်ချက်ချင်းပြန်ထပြီး back ကိုယူလိုက်တာပေါ့ တစ်ချို့ကို side control ယူလိုက်တယ်ပေါ့ အဲ့ဒီ့အချိန်မှာပဲ ချုပ်လိုက်တဲ့အတွက် သူ့ဘက်က အားသာသွားတယ်ပေါ့နော် ”
“တကယ်လို့သာအောင်လအဲ့တစ်ချက်မှာ ပြန်ထနိုင်မယ်ဆိုရင် သတိထားပြီးခွာဆော့ရင်ဆော့ မဟုတ်ရင် ဒူးတွေဘာတွေ သုံးလိမ့်မယ်ထင်တယ် အဲ့တာတွေမရှိလိုက်ဘဲနဲ့ ပွဲကတော်တော်လေးမြန်သွားတယ်” လို့ ဖိုးသော်ကတော့ သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်နော် ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေ။
အဆုံးထ်ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးလဲ သာယာတဲ့ နေ့တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်…
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈျဖစ္သြားတဲ့ ေအာင္လအန္ဆန္ အေပၚ အခ်က္အလက္က်က် သံုးသပ္ျပလိုက္တဲ႔ လက္ေဝွ႔ ဖိုးေသာ္
အႀကိမ္ႀကိမ္ေအာင္ပြဲဆင္လာတဲ့ ေအာင္လတစ္ေယာက္ Rienner နဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ရႈံးခဲ့တဲ့အတြက္ အားလုံးေအာင္လအတြက္ ဝမ္းနည္းခံခက္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္ေနာ္။
ေအာင္လအန္ဆန္ရႈံးသြားတဲ့ ပြဲအေပၚကို လက္ေဝွ႔သမား ဖိုးေသာ္ကေတာ့ Sunday Journal နဲ႔အင္တာဗ်ဴးမွာ အခုလိုပဲ သုံးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ေနာ္ ပရိတ္သတ္ႀကီးတို႔ေရ။
“ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ေတာ့ ကိုဗစ္နဲ႔မဆိုင္ဘူး သုံးခ်ီ ေလးခ်ီမွာ က်သြားရင္ေတာ့ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္တယ္ေပါ့ အခုပထမအခ်ီမွာ သူလည္းေလ့က်င့္ထားတာဗ်ာ မေမာဘူး ၃မိနစ္နဲ႔၂၆စကၠန႔္မွာပြဲၿပီးသြားတာေနမယ္ သုံးမိနစ္ေက်ာ္အတြင္းမွာ ခ်န္ပီယံတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လက္ရည္က်စရာအေၾကာင္းမရွိဘူးေပါ့ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ သူစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းနည္းေလးစိတ္ထိခိုက္သြားပုံရတယ္ေပါ့ေနာ္ ရႈံးသြားေတာ့ဝမ္းနည္းတဲ့ပုံစံျဖစ္ေနတယ္ Team စိတ္ဓာတ္ေပါ့ေနာ္ တစ္သင္းတည္းမွာ ခ်န္ပီယံ ၂ေယာက္အတူတူကာကြယ္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဘာလုံးနဲ႔ဥပမာေပးရင္ ေရွ႕မွာ ပင္နယ္တီတစ္ေယာက္မဝင္သြားသလိုေပါ့ ေနာက္ကန္မယ့္သူက pressureဝင္သြားသလိုေပါ့”
“ေနာက္တစ္ခ်က္က ground day မွာ ပထမအခ်ီမွာပဲ ရေအာင္လုပ္သြားႏိုင္တယ္ေပါ့ေနာ္ ခ်က္ခ်င္းပဲဟိုဘက္က back position ကိုယူလိုက္တယ္ သူေတာ္ေတာ္လွ်င္ျမန္တာေပါ့ ဒီတစ္ကြက္ကို က်င့္ယူထားတဲ့ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္ အားသာခ်က္က အရပ္ရွည္ေတာ့ ေျခတံလက္တံရွည္ေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ရသြားတာေပါ့ …
လူခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံးကိုခ်ဳပ္လိုက္တယ္ အဲ့မွာ ေအာင္လျပန္လွည့္လို႔မရေတာ့ဘူး အဲဒီ့အခ်ိန္မွာေအာင္လက ေနာက္ကိုသံဇကာနဲ႔ကပ္ၿပီး pressure ေပးထားတယ္ေပါ့ ဒါက space ရွိမွရမွာေလ လႈပ္ရွားမရဘူး အဲဒီ့အခ်ိန္မွာလွဲခ်လိုက္တယ္ ေအာင္လကလွန္ၿပီး ျပန္ေရွာင္ထြက္ဖို႔ႀကိဳးစားခ်ိန္မွာ ပထမအခ်ီဆိုေတာ့ ေခြၽးမထြက္ေသးေတာ့ ေခ်ာေမြ႕မႈမရွိေသးဘူးေပါ့ေနာ္ လုပ္ရကိုင္ရ ဆြဲထုတ္ရတာ က်ပ္ေနတာေပါ့ ေနာက္တစ္ခုက သူျပန္လွည့္ၿပီး ျပန္ထခ်ိန္မွာ အငိုက္မိသြားတယ္ေပါ့”
“ေအာင္လကသံဇကာကိုကိုင္ၿပီး ေရွ႕ကိုငိုက္မသြားေအာင္ လွမ္းထတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ႕စည္းမ်ဥ္းက သံဇကာကိုကိုင္ၿပီးထလို႔မရဘူးေပါ့ေနာ္ တြန္းတာကလြဲ၍ေပါ့ ေအာင္လက သံဇကာကိုကိုင္မရဘူးလို႔ ဒိုင္ျဖဳတ္ခ်လိုက္တယ္ အဲဒီ့အခ်ိန္ ေအာင္လျပဳတ္က်သြားေတာ့ ဟိုကလည္ပင္းကိုသိုင္းၿပီး ျဖဳတ္ခ်လိုက္တာေပါ့ ပထမအခ်ီျဖစ္တဲ့အတြက္ အားအရမ္းရွိတဲ့အခ်ိန္ သူအႀကိဳက္ဆုံးျဖစ္တဲ့ လည္ပင္းခ်ဳပ္တဲ့အကြက္နဲ႔ေပါ့…
ေအာင္လဆိုလည္း ပါဝါလက္သီးေတြေပါ့ ဟိုက ခ်ဳပ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေအာင္လဒုတိယအခြင့္အေရးမရဘူးျဖစ္သြားတာေပါ့ MMA မွာက နည္းနည္းေလးမွ အမွားမခံဘူးဗ် အခြင့္အေရးသာသြားတာနဲ႔ အႏိုင္အရႈံး result ထြက္သြားတတ္တယ္ ခ်န္ပီယံလုပြဲဆိုေတာ့လည္း ပိုဂ႐ုစိုက္ရတာေပါ့ ေအာင္လရႈံးသြားတာ သူ႔ရဲ႕performance အျပည့္မျပလိုက္ရေတာ့ ေက်နပ္မွာမဟုတ္ဘူး ဟိုဘက္ကလည္း အခြင့္အေရးရလို႔ ႏိုင္သြားတာေပါ့ ဘာပဲေျပာေျပာအားလုံးရင္ကြဲရတာေပါ့ေနာ္”
“ပြဲအေျခအေနက ႐ိုင္ဒီယာက သူေျပာတဲ့အတိုင္းခ်ဳပ္ကြက္နဲ႔ပဲကစားတာ သူထိုးလည္းတြဲလုံးနည္းတယ္ ပထမသူခ်ဳပ္လိုက္ခ်ိန္မွာ ေအာင္လကပင့္လက္သီးထိုးလိုက္တယ္ေပါ့ေနာ္ ပင့္လက္သီးလြတ္သြားတယ္ ေျခေထာက္ကန္တာေတာ့ထိသြားတယ္ ႐ုတ္တရက္ေပါ့ လုံးဝမထင္ထားတဲ့အခ်ိန္ risk ယူလိုက္တာေပါ့ မထင္မွတ္တဲ့အခ်ိန္မွာတစ္ကိုယ္လုံးပစ္ဝင္လိုက္တာ ေအာင္လလည္းမထင္လိုက္လို႔ျဖစ္မယ္ ဒူးေတာင္မတိုက္လိုက္ဘူးေပါ့ ၿပီးသြားတဲ့အခ်ိန္ခ်က္ခ်င္းျပန္ထၿပီး back ကိုယူလိုက္တာေပါ့ တစ္ခ်ိဳ႕ကို side control ယူလိုက္တယ္ေပါ့ အဲ့ဒီ့အခ်ိန္မွာပဲ ခ်ဳပ္လိုက္တဲ့အတြက္ သူ႔ဘက္က အားသာသြားတယ္ေပါ့ေနာ္ ”
“တကယ္လို႔သာေအာင္လအဲ့တစ္ခ်က္မွာ ျပန္ထႏိုင္မယ္ဆိုရင္ သတိထားၿပီးခြာေဆာ့ရင္ေဆာ့ မဟုတ္ရင္ ဒူးေတြဘာေတြ သုံးလိမ့္မယ္ထင္တယ္ အဲ့တာေတြမရွိလိုက္ဘဲနဲ႔ ပြဲကေတာ္ေတာ္ေလးျမန္သြားတယ္” လို႔ ဖိုးေသာ္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္ေနာ္ ပရိတ္သတ္ႀကီးတို႔ေရ။
အဆုံးထ္ဖတ္ရႈေပးတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးလဲ သာယာတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစေနာ္…
ချစ်သူလေးဝါဆိုမိုးဦးနဲ့ game ကစားပြီး ရှုံးသွားလို့ ပိုက်ဆံပေးလိုက်ရတဲ့ ဖြိုးလေးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်..